Guusha ardayga waxaa ku jira aqoonta ardayga iyo kaqeybgalka ardayda. Qiyaasta aqoonta ardayga in ardayda ay gaareen ama dhaafiyeen heerarka fasalka iyo rajooyinka. Tallaabooyinka kaqaybgalka ardayda in ardayda ay kaqeybgaleen oo dhammeysteen qiimeyntii gobolka oo dhan. Kaliya ardayda ku bixisa inta badan sanad dugsiyeedka dugsiga lagu qorey ayaa lagu soo daray markii la soo sheegayo waxqabadka ardayda. (Isha xogta: Sanad dugsiyeedka 2018-2019)
Sidee ardayda ku jira shirkadan ay u fuliyaan qiimeynta guud ee gobolka?
Aqoonta ardayga ayaa ah inay ardaydu buuxisay ama dhaafiyeen heerarka fasalka iyo waxa laga filayo.
Fasalka 10 (Bayoolaji)
Celceliska Gobolka 38.6%
Aqoonta Sayniska Fasalka 10 (Bayoolaji)
Jinsiyada / Qowmiyadda
Madow / Afrikaan Mareykan ah
Dhaqaale ahaan liita
Sidee bay ardayda ku jira shirkaddan waxqabadka marka loo barbar dhigo bartilmaameedyada ku-meelgaarka ah ee gobolka ee barashada Ingiriisiga / Luqadda Farshaxanka iyo xisaabta?
Bartilmaameedyada ku-meel-gaarka ah waxay muujinayaan horumar la filayo in sanadle ah oo loo baahan yahay si loo gaaro yoolalka muddada-dheer ee gobolka ee karti-xirfadeedka.
Waa maxay heerarka aqoonta ee ardayda ku jirta shirkaddan muujineysa?
Heerarka leh dhibic cagaaran waxay muujinayaan dhibcaha gudbida ee muujinaya guul guul leh heerar-heerka iyo filashooyinka.
Hoos Ka Dhageyso Aqoonta
U soo dhowaanshaha Aqoonta
Fasalka sayniska 10 (bayoolaji)
ISTEP + Waxqabadka
Fasalka 10aad ee Fanka / Afka Ingiriisiga
Xisaabta Fasalka 10aad
Waa maxay heerarka kaqeybgalka shirkaddan ee qiimeynta gobolka oo dhan?
Tallaabooyinka kaqaybgalka ardayda in ardayda ay kaqeybgaleen oo dhammeysteen qiimeyntii gobolka oo dhan.
Kaqeybgalka Farshaxanka Ingiriisiga / Luqadda
Celceliska Gobolka 97.3%
Kaqeybgalka Farshaxanka Ingiriisiga / Luqadda Fasalka 10aad
Hawaiian ama Jasiiradda Baasifiga
Dhalad Mareykan ah
Boqolleyda ardayda kaqeyb galaya qiimeynta fanka Ingiriisiga / Luqadeed ee kale ee fasalka 10
Celceliska Gobolka 97.5%
Kaqeybgalka Xisaabaadka Fasalka 10aad
Boqolkiiba ardayda kaqeyb galaya qiimeynta xisaabta ee fasalka 10aad
Ka Qaybqaadashada Sayniska
Celceliska Gobolka 84.4%
Ka Qaybqaadashada Sayniska Fasalka 10 (Bayoolaji)
Eeg Warbixinta Waxqabadka Sannadlaha ah (APR). https://media.doe.in.gov/apr/2019/f9670-standard.pdf
Ka baro wax badan oo ku saabsan waxqabadka ardayga qiimeynta qaranka ee horumarka waxbarashada. https://nces.ed.gov/nationsreportcard/
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan ardayda dhigata dugsiga horaadka ku dhigta Indiana. http://www.elacindiana.org/data/elac-annual-report-interactive-dashboard/